Maya Magazine: ဘယ်လိုများနေရပါ့မယ်ရေးသူ - ဂျူး
ရေးသူ - ဂျူး
Oh... I, I need you in my arms need you to hold.
If you ever leave Baby you would take away
How do I live without you I want to know.
How do I breathe without you if you ever go.
How do I, how do I, oh.... how do I.
There'd be no sun in my sky.
There would love in my life.
There would be no world left for me.
you would take away everything meant in my life.
How do I live without you. I want to know.
How do I ever ever survive.
How do I go if you ever leave.
Baby don't you know that you're everything good in my life.
How do breathe without you if you ever go.
How do I, how do I, oh.. how do I live.
How do I live without you baby.
အဲဒါ... ဘယ်လိုဘ၀မျိုးများ ဖြစ်လာမှာပါလိမ့်။
ကိုယ့်ရင်ခွင်မှာ မင်းရှိနေမှ မင်းကို ဖက်တွယ်ထားရပါမှ
မင်းကသာ ကိုယ့်ကမ္ဘာ ကိုယ့်နှလုံးသား ကိုယ့်ဝိညာဉ်ပါ အချစ်ရယ်
အချစ်ရေ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ကောင်းခြင်းမှန်သမျှ အရာရာ
မင်းမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုနေမှာလဲ ကိုယ်သိချင်လှချည်ရဲ့
ကိုယ်ဘယ်လိုများ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်ပါ့မလဲကွယ်
ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်မသိတော့ပါဘူး အချစ်ရယ်
မင်းကိုသာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရရင် ကိုယ့်ဘ၀ဆိုတာ ကွယ်ပျောက်ရတော့မှာ
အချစ်ရေ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ တန်ဘိုးထားမြတ်နိုးရာမှန်သမျှလည်း
မင်းမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ ကိုယ်သိချင်လှချည်ရဲ့
မင်းမရှိဘဲ ကိုယ်ဘယ်လို အသက်ရှင်ရမှာလဲ
ကိုယ်ဘယ်လိုများ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေနိုင်ပါ့မလဲကွယ်
မင်းသာစွန်ခွါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်လို ရပ်တည်နေခဲ့ရမလဲ
ကိုယ့်ဘ၀မှာ မင်းဟာ ကောင်းမွန်ခြင်းအားလုံးဆိုတာ
မင်းမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမှာလဲ ကိုယ်သိချင်လှချည်ရဲ့
ကိုယ်ဘယ်လိုများ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေရပါ့မလဲကွယ်
မင်းမရှိတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုနေရပါ့မလဲ အချစ်ရယ်။
xxx --- xxx --- xxx
အဲဒီသီချင်းကို Diane Warren က ရေးစပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Celine Dion သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတော်တော်များများကိုလည်း Diane Warren က ရေးစပ်ခဲ့တာပါ။
အခု သီချင်းကို မကြာသေးခင်က ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ နစ်ကပ်စ်ကေ့ဂ်ျပ်ဝင်တဲ့ Con Air ဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ဝင်သီချင်းအဖြစ် ထည့်သုံးခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကား အစကနေ အဆုံးအထိ မရပ်မနား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်တခုမှာ ဒီအချစ်သီချင်းဟာ ဘယ်လိုမှ အသုံးမတည့်နိုင်ဘူးလို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် သီချင်းကလေးက ကောင်းလွန်းနေတော့ သူနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းကလေးတကွက် ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဇာတ်သိမ်းကျတော့ လှသွားသလို ရှိပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို အမျိုးသမီး အဆိုတော်နှစ်ဦး မူကွဲသီဆိုထားတာ ကြားဖူးပါတယ်။ Trisha Yearwood နဲ့ Le Ann Rimes တို့ပါပဲ။ အသံထုထည်နဲ့ ခွန်အားခြင်းမတူသလို ဆိုဟန်ချင်းလည်း ကွဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တေးသွားသံစဉ်ကိုတော့ သစ္စာရှိရှိ တမူတည်း သီဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်သူ့သီချင်းက ပိုကောင်းသလဲလို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ နည်းနည်းခက်မယ်ထင်ပါရဲ့။ Trisha Yearwood က အသံအေးအေးရှရှလေးနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေး ဆိုသွားတယ်။ နောက်ခံဂီတကို သူ့အသံနဲ့ ဖုံးကွယ်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဂီတနဲ့ သီချင်းဟာ လှလှပပ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေး ပေါင်းစပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Le Ann Rimes ကတော့ အသံအောင်လွန်းတော့ လူငယ်ပီပီ ခွန်အားအပြည့်သုံးပြီး သီဆိုထားခဲ့တယ်။ သူ့အသံက သိပ်ကြီးနေတဲ့အခါ ဂီတက အသံနောက်ကို မလိုက်လာတဲ့ အကြိမ်တွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲကလာတဲ့အသံနဲ့ လည်ချောင်းထဲက ခွန်အားအပြည့်ပေါင်းလိုက်တော့ တော်တော် နားထောင်လို့ စွဲပါတယ်။ သူသီဆိုပုံက ချစ်သူ စွန့်ခွါထွက်သွားမှာ စိုးရိမ်တဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ ပူပန်သောကနဲ့ တွယ်ရာမဲ့ခံစားမှုကို အဓိကထားတယ်။
Trisha Yearwood သီဆိုပုံက တမျိုး၊ ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ တစိမ့်စိမ့် ချစ်မြတ်နိုးတွယ်တာမှုကို အဓိကထားတယ်။
မနှစ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အတော်များများမှာ မနက်ရောညပါ မကြာခဏ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ How do I live က Le Ann Rimes ရဲ့ သီချင်းဖြစ်ပေမယ့် ဂရမ်မီဆုရသွားခဲ့တဲ့ How do I live က Trisha Yearwood ရဲ့ သီချင်းပါ။
ခု ဘာသာပြန်တဲ့ သီချင်းက Le Ann Rimes ရဲ့ မူပါ။
Le Ann Rimes ဟာ Blue ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အသက် ၁၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးသတဲ့။ အခုတော့ ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်လောက်ပေါ့။ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်တာ အံ့သြအားကျစရာပဲ။ ဒါပေမဲ့ country music ရဲ့ သမိုင်းကိုတောင် ဒီကောင်မလေး သိရဲ့လားလို့ တချို့က မေးချင်ကြပါတယ်။ Le Ann ကတော့ ပြောတယ်။ သူ့ကို သြဇာသက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘာဘရာ စထရိုင်းဆန်း၊ ဂျူဒီဂါလင် နဲ့ ဆလင်းဒီယွန်တို့ပါပဲတဲ့။ အခု လောလောဆယ်တော့ သူ့အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော်ဟာ Artist လို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ဟိုစဉ်က Prince လို့ခေါ်တဲ့ အဆိုတော်ပါပဲ။
ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်မှုရတာ တနည်းတော့လည်း ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုဟာ ကံကောင်းလို့ ဖြစ်တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း လူတိုင်းမှာ ရှိနေမှာပါ။ သူ့မှာ ဘ၀အတွေ့အကြုံရယ်လို့ ဘာမှ မရှိခဲ့သေးတော့ သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ခံစားချက်နဲ့ စေတနာနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဘယ်ကများ ရနိုင်ပါမလဲပေါ့။
စတုတ္ထအယ်လ်ဘမ် Sitting on Top of the World ထွက်လာတဲ့အခါ Le Ann Rimes ကို ဝေဖန်ကုန်ကြပြီ။ အတွေ့အကြုံ အများကြီး လိုသေးတယ်တဲ့။
How Do I live ကို Con Air ရုပ်ရှင်အတွက် Le Ann Rimes နဲ့ အသံသွင်းခဲ့တာပါပဲ။ နောက်တော့ ပရိုဂျူဆာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေက Trisha Yearwood နဲ့ ပြန်ပြင်ပြီး အသံသွင်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတော့ မခံချင်စိတ်နဲ့လား မသိ၊ Rimes ရဲ့ တေးထုတ်လုပ်သူတွေက Record Album အဖြစ် How Do I Live ကို ဖြန့်ဝေလိုက်ကြတော့တယ်။
အဲဒီမှာ Le Ann Rimes နဲ့ Trisha Yearwood ဘယ်သူရဲ့ How Do I Live က ပိုသာသလဲလို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲ။
US မဂ္ဂဇင်းက ထရီရှာယီးယားဝုဒ်ကို အင်တာဗျူး မေးပုံကိုလဲ ကြည့်ဦး။
"ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး Le Ann ကို ခင်ဗျား အပြတ်အသတ် ဖြတ်ချပစ်လိုက်ချင်မှာပေါ့နော်" တဲ့။
Trisha Yearwood က ဖြေတတ်ပါတယ်။
''ကျွန်မကိုယ်တိုင် မလိုလားတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုထဲမှာ အတင်းအကျပ် ထည့်ပြိုင်ခံရတာကို ကျွန်မမုန်းတယ်၊ တကယ်လို့သာ ကျွန်မနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ တယောက်ယောက်ကို ရွေးစမ်းဆိုရင် Le Ann ကို ကျွန်မ နောက်ဆုံးထားပြီး ရွေးမိမှာပဲ။ အသက် ၁၅ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ဒီကလေးမဟာ အြံ့သချီးကျူးစရာ အသံကို ပိုင်ထားပြီး ဓာတ်ပြားချပ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရောင်းနေရတာပါ" တဲ့။
"ခင်ဗျားအသက် ၁၅ နှစ်တုန်းက ခင်ဗျားဘာလုပ်နေပါသလဲ" အင်တာဗျူးသမားက မေးပြန်တယ်။
"အင်း.... အိပ်ခန်းထဲမှာ လင်ဒါရွန်းစတက်ကို တုပြီးတော့ Prisoner in Disguise သီချင်းကို ဆိုနေခဲ့မိသလား မသိပါဘူး"
ဒီသီချင်းရဲ့ စာသားတွေ ရိုးရိုးကလေးနဲ့ လှပနေတာတော့ ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။
သီချင်းကို နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါ သံစဉ်တေးသွားရော ဂီတဖွဲ့စည်းမှုပါ အင်မတန် အားကောင်းတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
[ဂျူးစာပေ၊ စာအုပ်အမှတ်စဉ် ၁၆၊ ဂျူး - နိုဝင်ဘာမိုး၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ်၊ မှ ကူးယူဖော်ပြပါ တယ်။]
Posted by Maung Aye Win at 8:37 AM